Mareykanka oo digniin kasoo saaray weerar Alshabaab ku qaadan dalka Burindi – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Wasaaradda Arrimaha Debadda Mareykanka ayaa war ay soo saartay ku sheegtay in laga yaabo in Alshabaab weerar ka geystaan dalka Burundi oo ka mid ah dalalka ciidamada usoo diray Soomaaliya.
Mareykanka ayaa soo saaray war kooban oo uu ku sheegay in Alshabaab doonayaan iney weeraro ka geystaan dalka Burundi, lagana yaabo iney si gaar ah u bartilmaameedsadaan danaha Mareykanka.
Waxey wasaaradda Arrimaha Debadda Mareykanka kula talisay muwaadiniiinta dalkeeda iney joojiyaan safaradda aan muhiimka aheyn ee ku aadaan dalka Burindi.
Digniinta wasaaradda Arrimaha Debadda Mareykanka ayaa loogu sheegay dadka Mareykanka ah ineysan ku safrin wadooyinka soo gala caasimadda dalkaas ee Bujumbura, waxaana shaqaalaha Safaarada Mareykanka la faray ineysan habeenkii socon.
Dalka Burundi ayaa ka mid ah dalalk Afrika ee Soomaaliya usoo diray ciidamada AMISOM ee la dagaallama Alshabaa, waxaan urukaasi horay weeraro uga fuliyey wadamada Kenya, Djibouti iyo Uganda oo ay ciidamo ka joogaan dhulka Soomaaliya, halka la fashiliyey weeraro ay ka geysan rabeen caasimadda Itoobiya ee Addis Ababa.